Indlela i-Airbnb evikela ngayo ababungazi
Sithathe izinyathelo ezinzulu zokusiza ukugcina wena, ikhaya lakho nezivakashi zakho niphephile.
Bungaza izivakashi ezinhle kakhulu
Izibuyekezo ezikabili ezikahle
Ukusiza ukwakha ukwethembana nedumela ku-Airbnb, izivakashi nababungazi banikezana izibuyekezo ngemva kokuthi ukubhukha ngakunye sekuphelile. Ngaphambi kokungenisa isivakashi, ungabheka izibuyekezo zazo zabanye ababungazi.
Ukuxhumana nezivakashi okulula
Uma ufuna ukubuza imibuzo noma ukusetha okulindelwe ngaphambi kokuhlala, ungakwazi ukwazi izivakashi kusengaphambili usebenzisa ithuluzi lethu lokuthumela umyalezo elivikelekile.
Ungenza kube isidingo ukuthi zonke izivakashi zinikeze ngomazisi ku-Airbnb ngaphambi kokubhukha nawe. Uzoba nethuba lokubuyekeza ukubhukha ngaphambi kwesikhathi noma wengeze ezinye izilawuli zokuthi ubani okwazi ukubhukha. Njengokunye ukuhlola, konke ukubhukha kwe-Airbnb kunikezwa iphuzu lobungozi futhi sikhansela noma yikuphi ukubhukha okubonakala kusolisa.
Indawo yakho, imithetho yakho
Ukusiza ukusetha okulindelwe, ungafaka Imithetho Yendlu izivakashi okufanele zivumelane nayo ngaphambi kokubhukha, ngokwesibonelo imikhawulo ekubhemeni nemicimbi. Uma isivakashi sephula omunye wale mithetho uma sesibhukhile, ungakhansela ukubhukha.
Ngifundile ukuthi abantu balungile. Ngiyakwazi ukwethemba abantu.
UMilaida ubungaza e-Puerto Rico ukuze enze imali ethe xaxa.
Ukuvikelwa kokulimala kwendlu okungu-$1,000,000
Esimweni esingavamile sokulimala kwendlu, Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Se-Airbnb sinikeza ukuvikelwa kwamahhala okufika ku-$1,000,000 USD ngokulimala kwendlu ngakho konke ukubhukha, isikhathi ngasinye. Izimangalo zingafakwa ngokuqondile Ngesikhungo sethu Sesixazululo.
Funda kabanzi mayelana nesiqinisekiso sokubuyiselwa se-Airbnb
Umshuwalense wokulwa nezingozi
I-Airbnb inikeza I-Host Protection Insurance yamahhala ehlangabezana nezimangalo zesibopho ezifika ku-$1,000,000 USD. Lo mshuwalense owesenzakalo esinamathuba amancane okuthi singenzeka lapho othile ekubeka icala noma efaka isimangalo ngokumelene nawe ngokuqondene nokulimala emzimbeni noma ukulimala kwempahla okwenzeka endlini, noma endlini ye-Airbnb, phakathi nokuhlala.
Funda kabanzi mayelana ne-Host Protection Insurance yakwa-Airbnb
Ikhavareji emahhala ngokuphelele
Kusebenza ngokuzenzakalelayo kukho konke ukubhukha
Izimangalo zingafakwa ngokuqondile nge-Airbnb
Sikhona ukusiza 24/7
Lokho iqembu lethu elingakwenzela khona
Iqembu lethu lomhlaba wonke lilindile 24/7 ukukusiza wena nezivakashi zakho ngocingo, i-imeyili, nokubhalelana imiyalezo.
Usizo lokubhukha kabusha
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa nezimangalo zomshwalense
Abahambi bathathe uhambo lwezigidi ezingu-49 nge-Airbnb ngo-2017. Okungu-1 kuphela kokungu-25,000 okuphumele kusimangalo sokulimala kwendlu esiphawulekayo.
Yini edingekayo ezivakashini ngaphambi kokubhukha?
Sicela wonke umuntu osebenzisa i-Airbnb ukuthi asinikeze imininingwane embalwa ngaphambi kokuba abe nohambo nathi. Izivakashi kudingeka zigcwalise le mininingwane ngokuphelele ngaphambi kokuba zenze isicelo sokubhukha. Le mininingwane isiza ukuthi uqiniseke ngokwazi ukuthi ungalindela bani, nokuthi ungaxhumana kanjani nesivakashi.
Izimfuneko ze-Airbnb ngezivakashi zihlanganisa: • Igama eliphelele • Ikheli le-imeyili • Inombolo yocingo eqinisekisiwe • Umyalezo wesingeniso • Isivumelwano Semithetho yakho Yendlu Imininingwane yokukhokha
Akudingekile, kodwa izivakashi kulindeleke ukuthi zibe nesithombe sephrofayili. Ungase futhi ucele ukuthi izivakashi zinikeze ngomazisi ngaphambi kokubhukha indawo yakho.
Kusebenza kanjani okushiwo abanye?
Zonke izibuyekezo ku-Airbnb zibhalwe ababungazi nezivakashi zomphakathi wethu, ngakho noma yisiphi isibuyekezo osibonayo sisekelwe ekuhlaleni isivakashi esibe nakho endlini yombungazi. Unezinsuku ezingu-14 ngemva ukuthi ubhale ukuphawula ngendawo yokuhlala futhi ungahlela ukuphawula kwakho kuze kufike emahoreni angama-48 ngemva kokuthumela, ngaphandle uma isivakashi sakho siqedela ukuphawula kwaso. Uma nobabili niqeda ukuphawula kwenu, noma kudlula izinsuku ezingu-14, ukuphawula kuyashicilelwa. Ungathola ukuphawula kwakho okuvela ezivakashini nganoma yisiphi isikhathi lapho ubhukhwa isivakashi, ungakwazi ukubheka ukuphawula kwazo okusuka kubabungazi besikhathi esidlule.
Ngenzenjani uma isivakashi siphula okuthile endaweni yami?
Uma isivakashi siphula okuthile futhi udinga isinxephezelo, ungakwenza lokho esikhungweni sethu Sesixazululo kungakapheli izinsuku eziyi-14 zokuphuma kwesivakashi sakho noma ngaphambi kokungena kwesivakashi esilandelayo, noma yikuphi okwenzeka kuqala. Uma isivakashi sakho sivuma ukukhokha inani olicelile, sizokunika imali yakho ezinsukwini ezingu-5 kuya kwezingu-7 zokusebenza. Uma isivakashi sakho senqaba noma kuze kudlule amahora angu-72 singaphendulile, ungahilela i-Airbnb kuleli cala. Uma sidinga amadokhumenti engeziwe, uzonikwa amahora angu-72 okuba ulethe la madokhumenti. Izicelo eziningi zokuthola isinxephezelo zizoxazululwa kungakapheli isonto elilodwa. Sizoqinisekisa ukuthi wena nesivakashi sakho nimelelwe kahle, futhi uma sithola ukuthi ngempela ukweletwa imali, sizoyithumela kuwe ihamba yodwa.
Yini okufanele ngiyenze uma ngingakhululekile ukubungaza umuntu othile?
Uma isivakashi siphula omunye Wemithetho Yendlu oyibekile noma sikwenze wazizwa ungaphephile ngezenzo zabo, ungakwazi ukunqaba isicelo sabo sokubhukha noma ukukhansela ukubhukha. Ngaphambi kokuthi wamukele ukubhukha ungenqaba isicelo sokubhukha sothile futhi ngeke kube nomthelela omubi ekufakweni kwendlu yakho emiphumeleni yosesho. Uma wenqaba izicelo zokubhukha eziningi noma iningi lazo, ukubekwa kwakho emiphumeleni yosesho kungaba nomthelela ongemuhle. Ngemva kokuthi wamukele ukubhukha Uma usuvele wamukele ukubhukha, ungakwazi ukukhansela. Ungase uhambisane nezinhlawulo zokukhansela uma isivakashi singaphuli noma yimiphi Imithetho Yendlu.
Uyini umehluko phakathi Kwesiqinisekiso Sokubuyiselwa se-Airbnb kanye ne-Host Protection Insurance?
Ukulungele ukuqala ukubungaza?